नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय तलाक वकीलहरू - Law & More
तपाईंको सेप्टेसनको साथ सहयोग चाहिन्छ? कृपया हाम्रो डाइभरी मालिकहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्
सम्बन्धविच्छेद सबैको लागि प्रमुख घटना हो।
यसैले हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरू तपाइँको व्यक्तिगत सल्लाहको साथ छन्।
सम्बन्धविच्छेद प्राप्त गर्न को पहिलो चरण एक तलाक वकिललाई काममा लिनु हो। न्यायाधीशले सम्बन्धविच्छेदको फैसला सुनाउँछन् र एक वकिलले मात्र अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि याचिका दायर गर्न सक्छ। सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाहीका विभिन्न कानुनी पक्षहरू छन् जुन अदालतले निर्णय गर्दछ। यी कानूनी पक्षहरूका उदाहरणहरू:
Your तपाईको संयुक्त सम्पत्ति कसरी विभाजित गरिएको छ?
Your के तपाईंको भूतपूर्व पार्टनर तपाईंको निवृत्तिभरणको अंशको हकदार छ?
Your तपाईंको सम्बन्ध विच्छेदको कर परिणामहरू के हुन्?
Your तपाइँको पार्टनर spousal समर्थन को हकदार छ?
So यदि हो भने, यो गुनासो कत्तिको हो?
• र यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूसँग कसरी सम्पर्क राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ?
"Law & More वकिलहरू संलग्न छन् र ग्राहकको समस्याको साथ समानुभूति गर्न सक्दछन्। "
हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरुबाट कदम कदम पछि योजना
जब तपाईं हाम्रो फर्मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, हाम्रो एक अनुभवी वकिलले तपाईंसँग सिधा कुरा गर्नेछन्। Law & More आफैंलाई अन्य कानुन फर्महरू भन्दा फरक पार्छ किनभने हाम्रो फर्मको सेक्रेटेरियल अफिस छैन, जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि हामीसँग हाम्रा ग्राहकहरुसँग संचारको छोटो लाइन छ। जब तपाइँ सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा टेलिफोनबाट हाम्रो वकिललाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले पहिले तपाइँलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्नेछन्। हामी तपाईंलाई आइन्डहोभनमा हाम्रो कार्यालयमा आमन्त्रित गर्नेछौं, ताकि हामी तपाईंलाई चिन्न सकौं। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, भेटघाट टेलिफोन वा भिडियो सम्मेलन मार्फत पनि हुन सक्छ।
This यो पहिलो अपोइन्टमेन्टको दौरान तपाईं आफ्नो कथा भन्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंको अवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्नेछौं। हाम्रो विशेष सम्बन्धविच्छेद वकिलहरूले आवश्यक प्रश्नहरू पनि सोध्ने छन्।
Then त्यसपछि हामी तपाईंसँग तपाईंको अवस्थामा लिनु पर्ने खास कदमहरूको बारेमा छलफल गर्छौं र यसलाई स्पष्ट रूपमा नक्शा बनाउँछौं।
• थप रूपमा, यस बैठकको दौरान हामी सम्बन्धविच्छेदको कार्यवाही कस्तो देखिन्छ, तपाइँले के आशा गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यवाही सामान्यतया कत्ति समय लिनेछ, हामीलाई कुन कागजातहरू चाहिन्छ, इत्यादि सूचित गर्दछौं।
Way यस तरिकाले तपाईलाई राम्रो विचार हुन्छ र थाहा छ के आउँदैछ। यस बैठकको पहिलो आधा घन्टा नि: शुल्क हो। यदि, बैठकको क्रममा, तपाईंले यो निर्णय गर्नुभयो कि तपाईंलाई कुनै एक अनुभवी सम्बन्धविच्छेद वकिलले तपाईंलाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने, हामी स your्लग्नताको सम्झौता प्राप्त गर्न तपाईंको केही विवरणहरू रेकर्ड गर्नेछौं।
सम्बन्ध विच्छेदले बच्चाहरूलाई ठूलो असर पार्दछ। त्यसकारण हामी तपाईका बच्चाहरूको चासोमा ठूलो मूल्य दिन्छौं
पहिलो बैठक पछि, तपाईं तुरून्त ईमेल मार्फत हामीबाट एक कार्य सम्झौता प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सम्झौताले बताउँछ, उदाहरणका लागि, हामी तपाईलाई सल्लाह दिन्छौं र तपाईको सम्बन्ध विच्छेदको समयमा तपाईलाई सहयोग गर्नेछौं। हामी तपाईंलाई सामान्य सर्त र सर्तहरू पठाउनेछौं जुन हाम्रो सेवाहरूमा लागू हुन्छ। तपाईं डिजिटल सम्झौता हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ।
असाइनमेन्टमा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता प्राप्त गर्दै, हाम्रो अनुभवी सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरू तुरून्त तपाईंको केसमा काम गर्न सुरू गर्दछन्। मा Law & More, तपाइँ तपाइँको सम्बन्ध विच्छेद वकिल तपाइँको लागी लिन्छ सबै कदमहरु को बारे मा सूचित राखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा, सबै चरणहरू तपाइँसँग पहिले समन्वयित हुनेछन्।
अभ्यासमा, पहिलो चरण प्रायः सम्बन्ध विच्छेदको सूचना सहित तपाइँको पार्टनरलाई एक पत्र पठाउनु हो। यदि ऊ वा उनीसँग पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी वकिल छ भने, त्यो पत्र उसको वा उसको वकीललाई सम्बोधन गरिन्छ।
यस पत्रमा हामी स indicate्केत गर्दछौं कि तपाईं आफ्नो जोडीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहानुहुन्छ र यदि वा उसले पहिले नै गरेको छैन भने उसलाई वकिल लिन सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईंको साथीको पहिल्यै वकिल छ र हामीले उसको वा उसको वकीललाई चिठी पठाउछौं, हामी सामान्यतया तपाईंको चाहनाको साथ पत्र पठाउने छौं, उदाहरणका लागि, बच्चा, घर, सामग्रीहरू, आदि।
तपाईंको पार्टनरको वकील यस पत्रमा प्रतिक्रिया दिन र तपाईंको पार्टनरको इच्छा व्यक्त गर्न सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, चार-तर्फ बैठक निर्धारित हुन्छ, जुन अवधिमा हामी एकसाथ सम्झौतामा पुग्न प्रयास गर्दछौं।
यदि तपाईंको पार्टनरसँग सम्झौता हुन सम्भव छैन भने, हामी तलाकको आवेदन सिधा अदालतमा पेश गर्न सक्दछौं। यस तरिकाले, प्रक्रिया शुरू भयो।
You के तपाई व्यक्तिगत व्यक्ति हुनुहुन्छ?
You के तपाईंलाई कानुनी सल्लाह चाहिन्छ?
You के तपाइँ तपाइँको कानूनी स्थिति मा एक स्पष्ट अन्तरदृष्टि चाहनुहुन्छ?
हामीलाई सिधा बटन मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो कल गर्नेछौं।
मसँग सम्बन्ध विच्छेद वकिलामा के लिनु पर्छ?
परिचय बैठक पछि सकेसम्म चाँडो सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया सुरू गर्न धेरै कागजात आवश्यक छ। तलको सूचीले आवश्यक कागजातहरूको स gives्केत दिन्छ। सबै कागजातहरू सबै सम्बन्धविच्छेदका लागि आवश्यक छैन। तपाईंको सम्बन्धविच्छेद वकिलले तपाईको विशेष केसमा संकेत गर्दछ, कुन कागजातहरू तपाइँको सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सिद्धान्तमा, निम्न कागजातहरू आवश्यक छन्:
Marriage विवाह पुस्तिका वा सहमति सम्झौता।
N पूर्वपूर्व वा साझेदारी सम्झौता सहित कागजात। यो लागू हुँदैन यदि तपाईं सम्पत्तीको समुदायमा विवाहित हुनुहुन्छ।
• धितो मोल र सम्बन्धित पत्राचार वा घरको भाडा सम्झौता।
Bank बैंक खाताहरू, बचत खाताहरू, लगानी खाताहरूको अवलोकन।
। वार्षिक विवरण, भुक्तान पर्ची र लाभ कथन।
Last अन्तिम तीन आय कर रिटर्न।
You यदि तपाईंसँग एउटा कम्पनी छ भने, अन्तिम तीन वार्षिक खाताहरू।
Insurance स्वास्थ्य बीमा नीति।
U बीमाहरूको सिंहावलोकन: कुन नाममा बीमा हुन्छन्?
Ru अर्जित पेन्सनहरूको बारेमा जानकारी। विवाहको समयमा पेन्सन कहाँ बनाइएको थियो? ग्राहकहरु को थिए?
There यदि debtsण छन्: समर्थन कागजातहरू र andणको अवधि र अवधि स collect्कलन गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सम्बन्ध विच्छेदको कार्य द्रुत रूपमा सुरू गर्न चाहनुहुन्छ भने, यी कागजातहरू पहिल्यै जम्मा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईको वकिलले परिचय केस पछि तुरुन्त तपाईको केसमा काम गर्न सक्छ!
जब बच्चाहरू संलग्न हुन्छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूको आवश्यकताहरू पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि यी आवश्यकताहरूलाई सकेसम्म सम्झेको छ। हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद वकीलहरु तपाईं संग एक प्यारेन्टिंग योजना बनाउन सक्छन् जो आफ्नो बच्चाहरु को लागी हेरचाह को विभाजन पछि स्थापित छ। हामी तपाइँको लागि भुक्तान गर्न वा प्राप्त गर्न बच्चा सहयोगको रकम गणना गर्न सक्छौं।
के तपाईं पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद हुनुहुन्छ र के तपाईंसँग द्वन्द्व छ, उदाहरणको लागि, पार्टनर वा बच्चा समर्थनको अनुपालन वा के तपाईंसँग तपाईंको विश्वास छ कि तपाईंको भूतपूर्व पार्टनरसँग अब हेरचाह गर्न पर्याप्त वित्तीय संसाधन छ? साथै यी केसहरूमा हाम्रो तलाक वकीलहरूले तपाईंलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न सक्छन्।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू सम्बन्ध विच्छेद
एक वकिललाई भाडामा लिन के खर्च लाग्छ?
Law & More एक घण्टा दर को आधार मा काम गर्दछ। हाम्रो प्रति घण्टा दर १ € १ is छ, २१% भ्याट् बाहेक। पहिलो आधा घण्टा परामर्श दायित्वमुक्त छ। Law & More सरकारी अनुदान प्राप्त सहायताको आधारमा काम गर्दैन।
के काम गर्ने विधि के हो Law & More?
मा वकीलहरू Law & More तपाईको समस्यामा संलग्न छन्। हामी तपाईंको अवस्था हेर्छौं र तपाईंको कानूनी स्थिति अध्ययन गर्दछौं। तपाईंसँगै हामी तपाईंको विवाद वा समस्याको दिगो समाधान खोज्दछौं।
सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियामा कति समय लाग्छ?
यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक संयुक्त वकिल राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस अवस्थामा अदालतले केही हप्तामा नै आदेश दिएर सम्बन्धविच्छेदको फैसला गर्न सक्दछ। यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्न भने, तपाईं प्रत्येकले उसको / उनको आफ्नै वकिल लिन पर्छ। यस्तो अवस्थामा, सम्बन्ध विच्छेद गर्न महिनौं लाग्न सक्छ।
के अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि सुनुवाई आवश्यक छ?
यदि तपाईं संयुक्त सम्बन्ध विच्छेदको विकल्प रोज्नुहुन्छ भने, अदालतमा सुनुवाईको आवश्यक पर्दैन। अदालतमा सुनुवाईमा एकतर्फी सम्बन्ध विच्छेदको कारवाही हुन्छ।
मध्यस्थतामा, तपाई मध्यस्थको सुपरिवेक्षणमा अर्को पक्षसँग मिलेर कुनै समाधानमा पुग्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। जबसम्म दुबै पक्षमा समाधान खोज्न इच्छुक छ, मध्यस्थतामा सफल हुने मौका हुन्छ।
कसरी एक मध्यस्थता प्रक्रिया काम गर्दछ?
एक मध्यस्थता प्रक्रिया समावेश: एक अन्तर्वार्ता र सम्झौतामा पुग्न धेरै सत्रहरू। यदि सहमति भएमा, सम्झौताहरू लिखित रूपमा राखिन्छन्।
कहिले मलाई सम्बन्धविच्छेद हुन्छ?
तपाइँ विवाह भएको नगरपालिकाको सिभिल रजिस्ट्रीको रेजिष्टरमा सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरिएको डेट्रीबाट तपाईसँग सम्बन्धविच्छेद भएको छ।
मेरो पूर्व पार्टनर र म सम्पत्ति को वैवाहिक समुदाय को विभाजन मा सहमत गर्न सक्दिन, अब हामीले के गर्नुपर्छ?
तपाईं अदालतलाई तपाईं र तपाईंको पूर्व पार्टनर बीच वैवाहिक सम्पत्ति को वैवाहिक समुदाय को विभाजन (तरीका) निर्धारित गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
हामीले साझा सम्पत्तीलाई के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईं सम्पत्तीको समुदायमा विवाहित हुनुहुन्छ भने, तपाईं यी चीजहरूलाई आधा भागमा विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ वा उनीहरूको मूल्य विचार गर्न अर्को व्यक्तिबाट लिन सक्नुहुनेछ।
म हाम्रो संयुक्त घरमा बस्न चाहन्छु, के यो सम्भव छ?
सुरूवात विन्दु भनेको तपाईं संयुक्त घरमा बस्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईले आफ्नो पूर्व पार्टनरलाई कुनै पनि अतिरिक्त मूल्यको आधा भुक्तान गर्न सक्षम हुनुभयो र तपाईको पूर्व पार्टनरलाई संयुक्त र मोर्टगेज forणका लागि धेरै दायित्वबाट मुक्त गरियो।
अविवाहित सहवासको समाप्ति, यो कसरी काम गर्दछ?
तपाईं अदालत बाहिर एक सम्बन्ध को वित्तीय सम्झौता व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सँगै बच्चाहरू छन् जसमाथि तपाईं दुबै अख्तियार प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं कानूनी रूपमा प्यारेन्टिंग योजना बनाउन बाध्य हुनुहुन्छ।
सम्बन्धविच्छेद को लागत के हो?
वकिलको लागत तपाइँको केसमा खर्च गरिएको समयमा निर्भर हुन्छ। अदालतको लागत € 309 (अदालत शुल्क) हो। सम्बन्ध विच्छेद याचिका सेवा पुर्‍याउने को लागी बेलीफ को शुल्क लगभग १०० डलर को छ।
सम्बन्ध विच्छेद पछि निर्माण-निवृत्तिभरणलाई के हुन्छ?
वैधानिक नियमन (निवृत्तिभरण समानता) को मतलब यो छ कि तपाईं विवाहको समयमा तपाईंको पूर्व पार्टनरले निर्मित बुढ्यौली पेंशनको %०% भुक्तानको हकदार हुनुहुन्छ। यदि दुबै साझेदारहरू सहमत छन् भने, तपाईं आफ्नो अधिकारहरूलाई वृद्ध-उमेरको पेन्सन र पार्टनरको पेन्सनमा तपाईंको आफ्नै स्वतन्त्र अधिकारलाई वृद्ध-उमेरको पेन्सन (रूपान्तरण) मा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ वा भिन्न डिभाजनको लागि विकल्प दिन सक्नुहुन्छ।
सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता के हो?
एक सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता पूर्व साझेदारहरू बीच एक सम्झौता हो जसमा तपाईं सम्झौताहरू राख्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं सम्बन्ध विच्छेद गर्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईं वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरु को बारे मा व्यवस्था र गुनासो। यदि सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता अदालतको आदेशको हिस्सा हो भने, यो कानूनी रूपमा लागू हो।
यदि मेरो पूर्व पार्टनरले सम्बन्ध विच्छेद करारको नियम पालन गर्दैन भने म के गर्न सक्छु?
यदि सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता अदालतको आदेशको हिस्सा हो भने, सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता एक लागू योग्य शीर्षक प्रदान गर्दछ। यो त्यसपछि कानुनी रूपमा लागू हो।
सम्पत्तीको समुदायमा मैले विवाह गरेको छु भने के हुन्छ?
जब तपाईं सम्पत्तीको समुदायमा विवाह गर्नुहुन्छ, सिद्धान्तमा तपाईं र तपाईंको पार्टनरको सबै सम्पत्ति र debtsण मर्ज हुन्छ। एक सम्बन्ध विच्छेद को मामला मा, सबै सम्पत्ति र debtsण सिद्धांत रूप मा तपाईं बीच समान साझा गरीन्छ। कहिलेकाँही यस्तो हुन सक्छ कि केहि चीजहरू हटाइएको छ, जस्तै उपहार वा उत्तराधिकार।
तर सावधान रहनुहोस्: २०१ 2018 देखि मानक सम्पत्तीको सीमित समुदायमा विवाह गर्नु हो। यसको मतलब यो छ कि विवाह अघि जम्मा सम्पत्ति समुदायमा समावेश गरीएको छैन। केवल सम्पत्तिहरू जो विवाहित साझेदारहरू विवाहको बखत जम्मा हुन्छन् सामान्य सम्पत्ति हुन्छन्। विवाह अघि व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वामित्वमा राखेका सबै कुरालाई समावेश गरिएको छैन। सम्पत्ति र / वा debtsण को मामला मा विवाह पछि अस्तित्व मा सबै चीज दुबै पक्षको सम्पत्ती हुन्छ। थप रूपमा, उपहार र पैतृक सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति रहन्छन्, विवाहको बखत। एउटा घर यसको लागि अपवाद हुन सक्छ, यदि यो विवाह अघि संयुक्त रूपमा खरीद गरिएको थियो।
यदि मैले विवाहपूर्व सम्झौताको अन्तर्गत विवाह गरेको छु भने के हुन्छ?
जब तपाईको विवाह भयो तपाईले आफ्नो सम्पत्ति र debtsण छुट्याउन छनौट गर्नुभयो। यदि तपाईं सम्बन्ध विच्छेद प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने कुनै पनि सम्झौता ब्यवस्था वा अन्य सहमति गरिएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
बन्दोबस्त खण्ड भनेको के हो?
सेटलमेन्ट क्लजहरू सेटलमेन्ट वा निश्चित आय र मानहरूको वितरणमा सम्झौता हुन्। त्यहाँ सम्झौताको दुई प्रकारहरू छन्: १) आवधिक समाधान ब्यवस्था: प्रत्येक बर्षको अन्त्यमा खाता (हरू) मा शेष बचत शेष रकम बराबर विभाजित हुन्छ। छनोट निजी सम्पत्ति अलग राख्नको लागि बनाईएको हो। संयुक्त लागत निर्मित पूंजीबाट निश्चित लागतहरू कटौती गरेपछि बन्दोबस्त हुन्छ। २) अन्तिम बन्दोबस्त उपधारा: सम्बन्ध विच्छेद भएको खण्डमा पनि अन्तिम सम्झौता उपधारा को उपयोग गर्न सम्भव छ। तपाईं र तपाईंको पार्टनरले त्यसपछि संयुक्त सम्पत्तिलाई त्यसरी नै विभाजित गर्नुहोस् जस्तो कि यदि तपाईं सम्पत्तीको समुदायमा विवाहित हुनुहुन्छ। विभाजनमा कुन सम्पत्ति समावेश गरिएको छैन तपाईं छान्न सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित सम्पत्ति के हुन्? कुन सामान सम्पत्तीको समुदाय बाहिर रहन्छ?
केही सम्पत्ति स्वचालित रूपमा तपाईं र तपाईंको पार्टनरको संयुक्त सम्पत्तीको रूपमा विशेषता हुँदैन। यी चीजहरू सम्बन्ध विच्छेदको बखत समावेश गर्नुपर्दैन। उत्तराधिकार वा उपहारहरू १ जनवरी २०१ 1 देखि सम्पत्तीको समुदायबाहिर पनि रहन्छ। १ जनवरी २०१ Before भन्दा पहिले, बहिष्करणको लागि उपहार वा विलको काममा समावेश गर्नुपर्‍यो।
यदि तपाईं भाँडामा सँगै बस्नुहुन्छ भने के हुन्छ?
सम्बन्धविच्छेद पछि कसलाई घरमा बस्न दिइन्छ भनेर न्यायाधीशले निर्णय गर्दछ, यदि तपाईंहरू त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने। त्यसपछि हाउसिंग एसोसिएसन वा घरमालिकसँगको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, एक व्यक्ति जसलाई त्यहाँ बस्न पाउने अधिकार एकल किरायका रूपमा दिइन्छ। यस व्यक्ति पनी भाँडा तिर्न र अन्य लागतहरु को लागी जिम्मेवार छ।
के हो र के घरेलु प्रभावहरूमा समावेश छैन?
घर, खलिज, बगैचा र गेराजमा सबैकुरा सामग्रीको अंश हो। यो कार वा अन्य सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुन्छ। यी प्राय: करारमा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ। के सामग्रीसँग सम्बन्धित छैन त्यो जडित सामानहरू हो, भान्साकोठामा निर्मित उपकरणहरू र, उदाहरणका लागि, भुइँहरू राखिन्छ।
गुनासोमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
कसरी बच्चा समर्थन कार्यवाही अगाडि बढ्छ?
गुनासो प्रक्रिया एक याचिका दायर गरेर शुरू। अदालतले त्यसपछि अर्को पक्षलाई रक्षा पेश गर्ने अवसर दिनेछ। यदि यो भयो भने, कार्यवाही सुनुवाईको हुनेछ। त्यसपछि अदालतले लिखित निर्णय दिनेछ।
के म spousal समर्थन को हकदार छु?
यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ वा एक दर्ता गरिएको साझेदारीमा प्रवेश गर्नुभयो र तपाईंलाई स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं spousal समर्थन पाउन योग्य हुनुहुन्छ।
मेरो पूर्व पार्टनरले मर्मतको भुक्तान गर्दैन, म के गर्न सक्छु?
तपाइँ तपाइँको पूर्व पार्टनर पूर्वनिर्धारित को सूचना दिन र एक समय सीमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ जुन बिरामीलाई भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंको पूर्व पार्टनरले अझै पनी समय सीमा भित्र भत्ता भुक्तान गर्दैन भने, यो पूर्वनिर्धारितको मामला हो। यदि मर्मत सम्बन्धी सम्झौताहरू एक अर्डरमा समावेश छन् भने, तपाईंसँग एक लागू योग्य शीर्षक छ। त्यसोभए तपाईले आफ्नो पूर्व पार्टनरबाट अदालत बाहिर गुनासो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो केस हैन भने, तपाईं अदालतमा अनुपालन माग गर्न सक्नुहुन्छ।
गुजारा भुक्तानी गर्दाको कर नतिजा के हुन्छ?
साझेदार गुजारा भुक्तानी गर्नेलाई कर घटाउन योग्य छ र प्राप्तकर्तालाई कर योग्य आय मानिन्छ। बाल गुनासो कर घटाउन योग्य वा कर योग्य हुँदैन।
तलाकमा बच्चाहरूको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
म मेरा छोरा छोरीहरू मेरो पुरानो साथीसँग बस्न चाहन्न, म यो व्यवस्था गर्न सक्छु?
तपाईं अदालतलाई आफ्ना बच्चाहरूको निवास स्थापना गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले यस्तो निर्णय लिने छ जुन केसको सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तपाईका बच्चाहरूको हितमा हुन्छ।
तपाईंले प्यारेन्टिंग योजना कहिले बनाउनुपर्दछ र यसले के समावेश गर्दछ?
यदि तपाईंसँग नाबालिग बच्चाहरू छन् जसमाथि तपाईंसँग संयुक्त हिरासत छ तपाईं एक प्यारेन्टिंग योजना बनाउन बाध्य हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको मुख्य निवास, हेरचाहको विभाजन, बच्चाहरूको बारेमा निर्णय गर्ने तरिका, कसरी बच्चाहरूको बारेमा जानकारी आदान प्रदान गरिन्छ र बच्चाहरूको लागतको विभाजन (बाल समर्थन) को बारे सम्झौता गरिनु पर्दछ।
सम्बन्धविच्छेद पछि अभिभावकको अधिकारको बारेमा के हुन्छ?
सम्बन्ध विच्छेद पछि दुबै अभिभावकले अभिभावकको अधिकार राख्दछन्, जबसम्म कि अदालतले संयुक्त अभिभावकीय अधिकार समाप्त गर्नुपर्दैन।
म कहिले बाल सहयोगको हकदार छु?
तपाईं बाल समर्थनको हकदार हुनुहुन्छ यदि तपाईं आफैंमा आफ्ना बच्चाहरूको लागतहरूको लागि पर्याप्त आय छैन भने।
कसरी बच्चा / पार्टनर समर्थनको निर्धारण गरिन्छ?
तपाईं बच्चा / पार्टनर समर्थनको राशिमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं सम्झौतामा यी सम्झौताहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अदालतले सम्झौताहरुलाई सम्बन्धविच्छेदको उर्दीमा रेकर्ड गर्दछ भने, तिनीहरू कानूनी रूपमा लागू हुन्छन्। यदि तपाईं सम्झौतामा पुग्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं अदालतलाई गुनासोको मात्रा निश्चित गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा न्यायाधीशले विभिन्न कारकहरू, जस्तै आय, वित्तीय क्षमता, बाल बजेट र भ्रमणको व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नेछ।
बच्चाहरूको सम्पत्तिलाई के हुन्छ?
यी सामानहरू बच्चाहरूको आफ्नै सम्पत्ति हो। तिनीहरू आफैले निर्णय लिन सक्दछन् कि तिनीहरूलाई के हुन्छ र कुन आमा वा बुबाको साथ तिनीहरू जानु पर्छ। यदि बच्चाहरू यो निर्णय गर्न कलिलो छन् भने, तपाईं र तपाईंको साथीले व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यदि तपाइँले बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको सूचीमा तपाइँको प्रश्नको उत्तर फेला पार्नुभएन भने, कृपया हाम्रा एक अनुभवी वकिललाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। तिनीहरूले तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छन् र तपाईंसँग सोच्न खुसी छन्!